China ezinamacala wire anezikhala umshini Ukwakha futhi Factory | Imishini ye-Youte
Olunezinhlangothi wire anezikhala kuyinto anezikhala wire esenziwe beveled wire anezikhala (ezinamacala ayisithupha) nokwelukiweyo kusuka izintambo zensimbi. Ububanzi bocingo olusetshenzisiwe buyahlukahluka ngosayizi wocingo olunezinhlangothi eziyisithupha. Ama-grid amancane anezinhlangothi ezinezingqimba zensimbi ezihlanganisiwe ngokuvamile asebenzisa izintambo zensimbi ezinobubanzi obungu-0.4-2.0 mm, kanti lezo ezinesendlalelo se-PVC ngokuvamile zisebenzisa izintambo zensimbi ze-PVC ezinobubanzi obungu-0.8-2.0 mm. Lolu hlobo lwenetha olunezinhlangothi eziyisithupha lusetshenziswa kakhulu enetheni lokuhlukaniswa kwamapulazi, uthango lwamadlelo, ikheji lezilwane nokwakha udonga. Lo mkhiqizo othembisa kakhulu.
I-LSW yensimbi enezinhlangothi ezinamacala ayisithupha, ephikisayo, nehlanekezelwe, ekhiqizwa yimboni yethu uhlobo olusha lwe-mesh uhlaka lokweluka olumunca ubuchwepheshe kanye nesakhiwo esithuthukisiwe sangaphandle, lusebenzisa ubuchwepheshe bokucubungula obuthuthukisiwe, futhi lunezici zalo ezihlukile. Lolu chungechunge lwemikhiqizo lwamukela ubuchwepheshe bokuluka besimiso esiphambili nesibuyela emuva ukukhiqiza ngqo inetha eliyizinhlangothi eziyisithupha elifanele ukucaciswa kocingo. Okwamanje kunezinhlobonhlobo zamamodeli afana no-1/2 intshi, 3/4 intshi, 1 intshi, 1.2 intshi, 1.5 intshi, 2 intshi, 3 intshi, njll. Umshini wensimbi we-hexagonal net we-braiding linezici zokuklanywa okufanele, isakhiwo esilula, ukusebenza okuzinzile, ukusebenza okuhle, inzuzo ephezulu nokugcinwa okulula. Kuthunyelwa eYurophu, eMelika, eningizimu-mpumalanga ye-Asia, eMpumalanga Ephakathi, e-Afrika nakwamanye amazwe nezifunda.
Bathi: Ingabe akhiqize uhlobo ngezifiso
Idivayisi ye-1.Wutch clutch brake, ingagijinywa, umshini ugijime kahle futhi umsindo uphansi;
2. Faka othomathikhi ophukile we-wire stop kanye ne-counter. Lapho ucingo oluphukile lwenzeka ngesikhathi senqubo yokweluka umshini, inetha eliphukile noma imitha yobude izoma ngokuzenzakalela lapho isendaweni, ne-alamu; ukunciphisa inetha eliphukile nokwenza ngcono ukukhiqiza kahle;
3. I-mesh ihlanzekile futhi ilinganisiwe, futhi ingaqiniswa maphakathi kwanoma iyiphi i-mesh ukukhulisa ukuqina kwemesh;
4. Umshini ufakwe uhlelo lokuthambisa oluzenzakalelayo, olusebenzisa ukuthambisa okuphakathi, okulula kakhulu ukukusebenzisa;
5. Ububanzi beNet, ububanzi bomshini obungu-2.6mm-6mm, bungaluka amanetha amaningi ngasikhathi sinye, kwandise ngempumelelo ukuphuma.
Mesh Hexagonal ubizwa nangokuthi anezikhala ezisontekile, ukwahlukanisa mesh, futhi anezikhala ethambile-nhlangothi zombili. Le net encane enamacala ayisithupha isetshenziselwa ukondla izinkukhu, amadada, amahansi, onogwaja nezicingo zoo, imishini yokuvikela, uthango lwasemgwaqweni, uthango lwenkundla yezemidlalo kanye namanetha okuvikela amabhande aluhlaza umgwaqo, ukutshala imithambeka (ukwenza uhlaza), intaba yedwala lasentabeni elenga amanetha Ukufafaza njll. Ngemuva i-wire mesh yenziwa isitsha esime njengebhokisi, ibhokisi lenetha ligcwele amatshe axokozelayo, njll., angasetshenziswa ukuvikela nokuxhasa imigoqo yolwandle, amagquma, imigwaqo, amabhuloho, amadamu kanye nobunye ubunjiniyela bomphakathi. Kuyinto enhle yokulawulwa kwezikhukhula nokumelana nezikhukhula.
1. olunezinhlangothi wire anezikhala umshini
3. Isipuni se-Spool
5. Isitendi esiqinile socingo
Langaphambilini Okuzenzakalelayo ezinamacala eziyisithupha wire anezikhala umshini
Olandelayo: Ingadi Net Machine
Okuzenzakalelayo Plc Control Hexagonal Wire Netting Machine
Inkukhu Cage Hexagonal Machine
Hexagonal Inkukhu Wire Mesh Machine
Hexagonal Wire Mesh Ukwaluka Machine
I-Hexagonal Wire Netting Machines
Umshini Omkhulu Wokunxhunywa Kwamacici
Iqonde Futhi Reverse Esontekile Hexagonal Wire Mesh Machine